လာမယ့်အားလပ်ရက်၊ ကမ်းခြေဒါမှမဟုတ်တောင်တန်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ဖျော်ဖြေမှုအားလပ်ရက်ဖြုန်းဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် ကမ္ဘာကြီးကိုလူနှစ်မျိုးခွဲခြားထားတယ်။ ကမ်းခြေမှာရေချိုးချင်တဲ့သူနဲ့တောင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေ။ အချို့ကအပူ၊ ရေနှင့်နေတို့ကိုကြည်ညိုလေးစားကြပြီးအချို့ကမူအအေးနှင့်အမြင့်ကိုဆွဲဆောင်ရန်အယူခံဝင်ကြသည်။
ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးနေရာများကိုဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျကြည့်ရှုလျှင်၊ ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲ?
ထွက်လေ့လာမှုများအရ, အနားယူခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကိုဖန်တီးရန်ရေနှင့်ပင်လယ်သည်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ဤသည်ကမ်းခြေစစ်တိုက်အနိုင်ရသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ပူနွေး။ ရာသီဥတုကိုပူနွေးစေသောလေ့ကျင့်သူများသည်တောင်ထူထပ်သောချမ်းခြင်းကိုအခြားအတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြပေမည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သိရန်လိုအပ်သည်မှာ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုနှစ် ဦး စလုံး၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကာလအတွက်သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများကို အားလပ်ရက်။
ပင်လယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းလျှောက်နိုင်သည့်သာယာသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးထားသည် အဝတ်အထည်များကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်စားပြီးဆားငန်ရေကိုခံစားပါ။ အဘယ်သူသည်အဖြူအသားအရေ tans ရှိပါတယ်။ နေ့နှင့်ညတွင်ပါတီပွဲ၌သင်ရေကူးနိုင်ပါသည်။
သို့သော်နေနှင့်ရေဆားငန်ရေကိုသည်းမခံသောသူများရှိသည်။ စိုစွတ်သောသဲများခံစားမှုကိုမုန်းသူများသည် ပို၍ နှစ်သက်သည် တောင်တန်းဒေသ၌အခန်းတစ်ခန်းငှားပါ။
သမုဒ္ဒရာအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနှင့်အမြဲတမ်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် အေးနှင့်တိတ်ဆိတ်သောတောင်ကြီး။ လူများစွာအတွက်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသောမြို့၏အပူနှင့်ဆူညံသံများကိုသင်လွတ်မြောက်နိုင်သည်။ ဤနေရာများတွင်သင်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မည် နိမ့်သောအပူချိန်မှာစိုက်ပျိုးနိုင်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ gastronomy။ မြင်းစီးခြင်းဖြင့်စီးနင်းခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
လေ့ကျင့်ရန်မလွယ်ကူကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည် ရာသီဥတုအခြေအနေအားကစား, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၎င်း၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်နှင့်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်။ ထို့အပြင်ရာသီဥတုအေးသောကြောင့်လူတိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်ပစ်ခြင်းမရှိပါ။ အခြားလူများကတိတ်ဆိတ်စွာပင်ပျင်းလာလိမ့်မည်။
ပုံရိပ်ရင်းမြစ် - Joya Life / Unifem
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။ သဲသောင်ပြင်သို့မဟုတ်တောင်? သင်၏အားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ
ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ရန်နွေရာသီဆုံးနည်း ၃ နည်း